Ụbọchị: 23 October 2019
All ọdụ ụgbọelu na Turkey, a afọ January-September oge na-gosipụtara puku 161 259 453 nde njem gaa. Pasent 22 nke ndị njem jiri ọdụ ụgbọ elu Istanbul. 9 kwa ọnwa na ọdụ ụgbọ elu Istanbul [More ...]
Karabük Iron and steel Industry and Trade Inc. (KARDEMIR), usoro atụmatụ ịbanye n ’ụlọ ọrụ ugbu a (ERP) SAP R3, SAP S / 4 HANA n’usoro dị ugbu a iji kwalite oru mgbanwe dijitalụ. [More ...]
Kedụ ọnọdụ maka iji Subsdebe Kaadị Subsmụ akwụkwọ? : Ankara Obodo ukwu na-emejuputa ngwa kaadị ndenye aha maka ụmụ akwụkwọ. 20 Site na October rue October 2019 ụmụ akwụkwọ n'okpuru afọ 27 200 kaadị kaadị 60 [More ...]
Anyị kwurịtara Orhan Sarıaltun, Onye isi oche nke Planlọ nke ndị na-ahụ maka atụmatụ City na Tezcan Karakuş Candan, Onye Isi Ala nke Ala Ankara nke berlọ chitelọ. Dabere na Can Deniz Eraldemir si Evrensel; [More ...]
Obodo Mersin Metropolitan, onye ọkwọ ụgbọ ala 73 mezuru ajụjụ ọnụ ndị ahụ mgbe ọkwa ahụ gasịrị. N'etiti ngwa 1003 ngụkọta, Obodo ukwu ga-ahụ maka onye ọkwọ ụgbọala 73, tinyere ụmụ nwanyị. Citizensmụ amaala nke Mersin [More ...]
Vehiclesgbọ njem ụgbọ njem ọha na-eje ozi na Kocaeli ejirila nwayọ malite ịkwaga na Kocaeli Metropolitan Municipality tarin ụtụ ego igwe (KentCard) kemgbe 2009. -Kwụ ụgwọ dịka ị ga - abanye n'ụgbọ njem na usoro KentCard [More ...]
Ihe omuma atu nke ndi ahia ahia nke ụgbọ njem na Antalya
Transportgbọ njem ọha na-azụta Peace Sozen, ndị njem Iran nọ na bọs na 30 puku ego nke mba ofesi na TL nyefere onye nwe obere akpa ahụ. Onye nlegharị anya Iran kelere onye ọkwọ ụgbọ ala maka omume ọmịiko ya. [More ...]
Ugbo ala mbu na ugbo ala nke ugbo ala nke ugbo ugbo ala nke Elsan A.Ş.
Istanbul, Ankara, Izmir, karịsịa na nnukwu obodo 12 eji okporo ígwè iga na obi nke ọdịdị "traction moto", oge mbụ na Turkey Elsen Inc. Nke mepụtara. Turkey mbụ emeputa nke electric Motors EMTask [More ...]
Assoc. Dr. Nleta Pelin Alpkökin na ESTRAM
Metrogbọ njem ụgbọ ala isi obodo nke isi obodo Assoc. Dr. Pelin Alpkökin zutere Mayor Büyükerşen na Eskişehir Light Rail System [More ...]
Minister nke Mmeputa na Teknụzụ Mustafa Varank kwuru, olarak Dị ka Minista Ozi, anyị na-etinye oke mkpa na Bursa na mmegharị ụlọ ọrụ anyị. Bursa, na akụrụngwa, ụlọ ọrụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa obodo nwere ike na-eme ka uru-kwukwara mmepụta ke Turkey. " [More ...]
Mkpụrụ nke Akụrụngwa mbụ nke Europe na-agụta ụbọchị
Ụlọ ọrụ na Technology Minister Mustafa Varank, Oyak Renault, aluminum engine nkanka maka oge mbụ na Turkey, na-ekwu na-emepụta High Pressure Ọgwụ Aluminium Factory, "nke a factory, Renault bụ mba anyị na naanị ngwakọ engine na Europe [More ...]
Mpaghara ohuru nke ohuru iji belata Mkpesa Akaụntụ ugbu a
Onye Minista ahia na teknụzụ Mustafa Varank kwupụtara na Asil Çelik na Gemlik Friili Mmepụta, nke a ga-ehiwe na Bursa, kwuru: [More ...]
Razọ ụgbọ oloko Russia iji mee ka ozigbo Belgrade Vrbnica Railway
Ragbọ okporo ígwè Russia na Serbia bịanyere aka na Montenegro (Bar) na nkwekọrịta maka mmejuputa atumatu a iji mee ka usoro okporo ụzọ okporo ụzọ Belgrade - Vrbnica. Onye isi oche na onye isi oche nke Railways Russia [More ...]
Turkey aku na uba na-mmiri nke arịa na-achụpụ na ego ewepụtara January-September oge bụ 1 ijeri okporo ụzọ nde 434 504 391 puku pound. Dabere na data nke General Directorate of Highways, 15 na Istanbul [More ...]
Mgbasa ozi maka mwepu nke Sapanca Cable Car Project Amalite
Ndị na-emegide ebe dị na mpaghara Hasanpaşa na Kırkpınar, Sapanca bidoro mgbasa ozi arịrịọ na ịntanetị. Ihe oru Teleferik, nke juputara na aka anyi banyere ogbe ndi a n’oge na-adịbeghị anya, ka na-ekwusi ike n’atụmatụ a. Emere ka ọ bụrụ ik [More ...]
A hoputara Doğan Energy CEO Burak Kuyan dị ka Onye isi oche nke Board of Directors of Energy Trade Association, nke keere òkè dị mkpa na ịmepụta ngwa ahịa n'efu kemgbe e guzobere ya. Afọ 2019 na Energy Trade Association [More ...]
Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan, Mịnịsta Ala nke Uzbekistan Elyar Ganiyev, Minista akụ na ụba Georgia na mmepe Natia Turnava na Minister nke Transportgbọ njem Afghanistan [More ...]
3 na-aga n'ihu na isi obodo Georgia, Tbilisi. Mgbe ọ na-ekwu okwu na Tbilisi Silk Road Forum, Turhan kwuru na mgbe usoro ụwa nke 30 na-eme kwa afọ, ọnụ ahịa azụmahịa nke etiti eruola nnukwu oke. Akụkụ akụ na ụba na-adọrọ mmasị [More ...]
Obodo Ankara na - aga n'ihu na - eme ihe ga - eme ka ọdịiche maka nchekwa ndị njem na njem ọha. Igwe ndi isi obodo, X-Ray na uzo uzo nke uzo uzo ugboala (ANKARAY na Metro Stations) na-enyocha kwa ubochi site na igwefoto nchebe. [More ...]
Enwetara Ekol na udi njikwa Carbon na 2019 Sustainable Business Awards nke ulo oru Sustainability Academy haziri maka udiri njem njem ya, nke o jiri buru uzo butere ngalaba a. N’ebe onyinye ntukwasiobi kwesiri ntukwasi obi, ndi ulo akwukwo mmuta jidere Ekol. [More ...]